Kiraro mihazakazaka, pataloha yoga, T Shirt, pataloha jogger, fitness bra - AIKA
Momba ny AIKA
AIKA Apparel Co ,. Ltd. dia miorina ao amin'ny Tanànan'i DongGuan, faritanin'i GuangDong. Mpanamboatra spaoro matihanina OEM manana traikefa mihoatra ny 10 taona izahay. Ny kalitao avo, ny serivisy avo lenta, ny fahombiazana avo lenta dia ny kolontsain'ny ozinina lehibe .Zahay manokana amin'ny Yoga Wear, Tracksuits, T Shirt, Shorts sns.
jereo ny ekipa rehetra
FIVAROTANA mafana Products
Taratasy avo lenta avo lenta ambongadiny marika marin-tànana ...
Ambongadiny mihazakazaka Workout Plain Loko Custom Un ...
Fanatanjahan-tena ara-panatanjahan-tena manao fanatanjahan-tena avo lenta fanaovana fanatanjahan-tena ...
Latest lamaody lamaody firavaka ambongadiny embroide ...
Custom maivana 100% Polyester Active 1/4 Zi ...
Fihetseham-pivarotana mafana manao 95% landihazo 5% spandex Me ...
Fanatanjahan-tena manokana amin'ny fanatanjahan-tena manao akanjo lava 4 ...
OEM Mavitrika haingam-pandeha fanatanjahantena haingam-pandeha Thumb Ho ...
ekipa mpivarotra matihanina izahay hiresaka moramora amin'ireo mpanjifa amin'ny teny anglisy amin'ny alàlan'ny mailaka sy telefaona. Ary isika rehetra dia mpamorona zokiolona amin'ny akanjo fanatanjahan-tena ary mahalala antsipirian'ny garmen.
manana mpamorona taratasy matihanina manokana izahay manana traikefa OEM & ODM efa mihoatra ny 10 taona, ary mahay amina endriny marika malaza Brand.
manana santionany samihafa mihoatra ny 500 pcs ao amin'ny orinasa izahay. Lamba fanatanjahan-tena avo lenta avy amin'ny SGS, fanamarinana GTT voamarina sns.
Izahay dia mpanamboatra fanatanjahan-tena matihanina mihoatra ny 10 taona traikefa. Tamin'ny 2015 Certified BISC Certification, Tamin'ny taona 2020 nandalo Intertek Certification. Covers 2000-3000 Square metatra miaraka amin'ny mpiasa 150 any Sina.
Manana ekipa matihanina sy mahomby izahay hamoaka santionany ao anatin'ny 7-10 andro, mitazona ny santionany rehetra sy ny entana betsaka rehetra ho tsara kalitao miaraka amin'ny Logo tsara, tsipika seam tsara.
Manana ekipa manao fizahana matihanina izahay hanao fizahana kalitao 100 isan-jato amin'ny in-6, izay hahazoana antoka fa voaravaka tsara ny kofehy rehetra ary azo atao ao anatin'ny fandeferana ny refy rehetra.
farany indrindra NEWS
Akanjo Fotsy T Tsy afaka miaina tsy misy ianao
Trendy vaovao avy amin'ny akanjo fanaovana akanjo AIKA
Karazana gym iray ho an'ny lehilahy miakanjo mody ...
Top Womens tsy misy tanany
Akanjo fanaovana fanatanjahan-tena lamaody